About Us - Ubushushu Umqali Co., Ltd.
Buyisela Ubushushu Elements
Boron ephuculweyo Crucibles
neerubhi, ngeempahla zakho Mortars
Zokufudumeza Lamp Tube
Obukhulu Film heater
Aluminium esingxobeni Imigudu
Abicah ngerabha esingxobeni Imigudu
Ubushushu Umqambi Group neyasekwa ngokusesikweni e Shanghai ngo-1994 kwaye umenzi ephambili ubilisa izinto kunye nezinto zenkxaso yodongwe e-China. Kunye mission of "ukonga amandla, umhlaba eluhlaza", senza iinqobo ezisemgangathweni "umthengi kuqala, umgangatho uphezulu".
Inkampani yethu kwiminyaka engaphezu kwama-15 amava amazwe, HEAT umseki Group kunye mveliso yayo ancedisayo Zhengxi (Shanghai) Industrial Co., Ltd. kuhamba SGS, TUV iziqinisekiso mveliso, kunye neemveliso eziphambili ziquka: izixhobo iwelding iplastiki, umoya oshushu zokufudumeza izixhobo, izinto zokufudumeza yodongwe, izinto kufudumeze metal,-lobushushu eliphezulu izinto yodongwe, kwaye izitifiketi umgangatho imveliso ezifana CE, RoHS, FCC. iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu iwelding zeplastiki, ulisebenzisa kufudumeze, inkqubo kufudumeze, biomass ucinezelo, unyango ubushushu, uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-lobushushu yokwambathisa, izixhobo kunye nezixhobo, aerospace kunye nezinye iinkalo.
Emva kweminyaka emininzi yophuhliso, Ubushushu Umqambi sele amasebe 4, iifektri 3, brand-4 nezikolo ezizimeleyo, kunye omenzi wechiza design and technology ngaphezulu kwama-20. HEAT Umqambi iye abathengi abaninzi abanyanisekileyo esekelwe eYurophu eMelika. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku, iqela lethu ngoosonjineli ngcali liyithumele ngempumelelo izisombululo zobushushu elicwangcisiweyo ngaphezu 800 kumazwe angaphezu kwama-60 ehlabathini lonke.
Ngelo xesha, inkampani ugcina intsebenziswano imveliso ukuvala kunye ukutshintshiselana zobugcisa kunye ezininzi iinkampani uThamsanqa 500 ezifana Volkswagen, Samsung, Sisco, Jikelele zombane kunye Philips.
Kangangexesha elide, siye usoloko efuna ekuphuhliseni uyilo imveliso entsha nokubonelela ngeenkonzo OEM / ODM. Sijonge phambili ekusebenzisaneni abathengi bethu ukuvula imarike ngokubanzi.
HEAT Umqambi - Yenza kube lula ukuba nobushushu!
Qhagamshelana nathi namhlanje ukufumana impendulo malunga Iinkcukacha ezininzi iimveliso zethu kwisithuba seeyure ezingama-24.
Idilesi: No.1898 Laiyin Road, Songjiang Area, Shanghai, China 201615
© Copyright - 1994-2020: HEAT FOUNDER All Rights Reserved. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
plastic Welding, abatyhidi Automatic, extrusion abatyhidi, zwi Igniter, yodongwe yokwambathisa ucinezelo , ubushushu Guns,